युएईमा पुरुष वा महिला सरसफाई कामदारको माग ! - jagritikhabar.com
युएईमा पुरुष वा महिला सरसफाई कामदारको माग !
UAE कामको लागि राम्रो ठाउँ हो। नेपाली कामदारका लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर छ । त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जसले आफ्ना सुविधाहरू सफा गर्न कामदारहरू खोजिरहेका छन्। नेपाली कामदारहरूका लागि पैसा कमाउने र अनुभव हासिल गर्ने यो ठूलो अवसर हो। युएई काम र बस्नको लागि उत्कृष्ट ठाउँ हो। त्यहाँ कामदारहरूलाई बस्न र काम गर्न धेरै सुविधाहरू छन्।
तलब राम्रो छ र काम गर्ने घण्टा लचिलो छ। नेपाली कामदारहरूका लागि अनुभव हासिल गर्ने र पैसा कमाउने यो ठूलो अवसर हो। कम्पनीको नाम लाहेज एण्ड सुल्तान क्लिनिङ सर्भिसेज एण्ड जनरल मेन्टिनेन्स कम्पनी हो। स्थिति क्लिनर हो। संख्या ४९५ पुरुष/महिला कामदारको मात्र माग। मासिक तलब रु 26,856 छ। कम्पनीको नियम अनुसार ओभरटाइमको सुविधा पनि छ ।
काम दिनको 8 घण्टा, हप्ताको6दिन हुनेछ। सबै कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क खाना उपलब्ध गराउनेछन्। सामान्यतया, एक कर्मचारीको रोजगार सम्झौता दुई वर्षसम्म रहन्छ। चिकित्सा उपचार र बीमा सम्बन्धी सबै खर्चहरू आवेदकहरूले कभर गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक, कम्पनीले विदेशमा भएका सबै खर्चहरू जस्तै चिकित्सा र बीमा कभरेजको प्रतिपूर्ति गर्नेछ।
अनुरोधमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई निःशुल्क भिसा र टिकटहरू प्रदान गर्नेछौं। विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा, आफ्नो LT नम्बर जाँच गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला । तपाईं तिनीहरूलाई तलको नम्बर र ठेगानाहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
नेपाल भर्ती एजेन्सीको नाम शिवाकोटी म्यानपावर प्राइभेट लिमिटेड लट नम्बर 262888 देशको नाम UAE कम्पनीको नाम लाहेज एण्ड सुल्तान क्लिनिङ सर्भिस एण्ड जनरल मेन्टेनेन्स क स्वीकृति मिति जानकारी २०७९/०१/२९
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्
तपाइँको कोटा कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आवेदन दिने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोटा पूरा भएको सम्भव छ। भर्ती एजेन्सीहरू र विदेशी रोजगारदाताहरूको लेनदेन इतिहास छ कि छैन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं यसलाई गुगल प्रयोग गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ।